Priapism: ဘာလဲ၊ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Priapism: ဘာလဲ, အကြောင်းတရားများနှင့်ကုသမှု
လူကြီးလူကောင်းရဲ့ကလပ် | | ကျန်းမာခြင်း
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများစွာအကြောင်းဖော်ပြထားသည်၊ အချို့မှာအလွန်လူသိများပြီးအမျိုးသားများစွာသည်ဆင်းရဲခက်ခဲမှုနှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ရှားပါးသောရောဂါများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီကနေ့မှာနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများမှလွဲလို့သိပ်မသိရသေးတဲ့ထူးခြားတဲ့ရောဂါတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောကြမယ်။
ငါတို့ပြောနေတာ စိတ်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ်တူညီတဲ့ကဘာလဲ အတင်းအဓမ္မစိုက်ထူ။ ဖြစ်ကောင်းနိုင်သည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အတော်လေးမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာအရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဤရောဂါမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှသို့မဟုတ်ဤရောဂါအကြောင်းကိုပြောပြရန်မဆိုပါ။ သင် priapism ခံစားခဲ့ရသောအဆွေခင်ပွန်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဦး ကိုမသိသောကြောင့်သင်မည်သူ့ကိုမျှ ၀ န်ချတောင်းပန်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့မှသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းပါမည်။ ၎င်းသည်အတော်လေးအသုံး ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်သင်ဟာရံဖန်ရံခါဆရာဝန်မဖြစ်လာခြင်း၊ မင်းရဲ့လိင်တံ၊ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူ့ကိုမင်းကိုစူးစမ်းဖို့၊ မင်းကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့၊ ကုသဖို့အတွက်ဆရာဝန်ဆီသွားခိုင်းပါ။
1 priapism ကဘာလဲ?
2 priapism ၏အကြောင်းရင်းများဘာတွေလဲ?
3 priapism များအတွက်ကုသမှု
4 ငါ priapism စိုးရိမ်ပူပန်သငျ့သလော
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေသောဤရောဂါသည်မျိုးပွားမှု၏ဂရိနတ်ဘုရား Priapus ၏အမည်ကိုခံယူရသည်။ ပန်းချီကားများနှင့်ပန်းပုများတွင်ကြီးမားသောနှင့်စိုက်ထူသောကျောက်ခေတ်သူတစ် ဦး အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသော Pertapus သည်အလှည့်ကျရောဂါ၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။
ဂရိဒဏ္myာရီကိုဘေးဖယ်ထား။ priapism ရောဂါကိုနည်းပညာအဖြစ်သတ်မှတ်သည် အထီးလိင်အင်္ဂါတွင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမလိုချင်တဲ့နှင့်မြဲစိုက်ထူ။
နှစ်ခုမျိုးကွဲ priapism, ischemic နှင့် Non- ischemic။ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိသောပထမကိစ္စတွင်လိင်တံသည်လိင်တံ၏အတွင်းပိုင်းမှသွေးကိုထုတ်ယူခြင်းမရှိဘဲကြာရှည်စွာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဤသည်ကခံစားနေရသောသူတို့အားပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ishhemic priapism သည်ဘုံနည်းပါးပြီး၊ လိင်တံသည်မြဲမြံစွာဖြစ်သော်လည်း ischemic variant ကဲ့သို့တင်းကျပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လုံးဝနာကျင်မှုမရှိပေ။ မည်သူမဆိုဤမူကွဲကနေခံစားနေရသူမည်သူမဆိုခံစားရမည်။ သို့သော်နာကျင်မှုနှင့်မသက်မသာမှုများစွာခံစားရသည်။
မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုလူတို့ခံစားနိုင်သည့်ဤရောဂါသည်မတူကွဲပြားသည့်အပြင်အလွန်ကွဲပြားသောအကြောင်းတရားများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် priapism များသောအားဖြင့်ဝေဒနာခံစားရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာထိုသို့ဖြစ်သည် သွေးကင်ဆာကဲ့သို့သောသွေးရောဂါခံစားခဲ့ရသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရသည် နှင့်အထူးသဖြင့်တံစဉ်ကိုဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ။ ဤနောက်ဆုံးရောဂါသည်သွေးနီဥများကိုပုံပျက်စေပြီးသွေးကြောများအတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤပုံသေနေသောသွေးနီဥသည်လိင်တံသို့ရောက်ရှိပါက၎င်းတို့သည်ပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပုံမှန်စီးဆင်းသည့်အတိုင်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမပျောက်ကွယ်သွားစေရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်စီးဆင်း။ မရပါ။
Priapism သည်လိင်တံ၊ တင်ပါးဆုံတွင်းသို့မဟုတ် Urethra ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောတိရိစ္ဆာန်များ၏အဆိပ်သည်ကင်းမြီးကောက်ကဲ့သို့သောရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်လေးနက်မှုမရှိဘဲနာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများသည်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် priapism ခံစားမှု၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်းအခိုင်အမာဆိုကြသည်။
ဤရောဂါအမျိုးအစားအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောခဲ့သကဲ့သို့အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုမှကျွန်ုပ်တို့ခံစားရလျှင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်သင့်သည် ပြီးပြည့်စုံတဲ့စာမေးပွဲအတွက်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသို့သွားပါ။ ထိုဆရာဝန်သည်ကုသမှုကိုလျှောက်ထားရန်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရန်တာဝန်ယူလိမ့်မည်၊ သို့သော်မည်သည့်အခြေအနေနှင့်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှမိမိကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဆက်ဆံသင့်ပါ။
priapism အဘို့, ငါတို့တ ဦး တည်းကုသမှုသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်ဖို့အလို့ငှာ ischemic သို့မဟုတ်မဟုတ်သော ischemic မူကွဲနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်ရှိမရှိခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ischemic priapism နှင့်ကြုံတွေ့ရပါကကုသမှုကိုစတင်ရန်အမြန်ဆုံးအထူးကုဆရာဝန်ထံသွားသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကအမြဲတမ်း Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။
သွေးကိုလိင်တံမှမစီးဆင်းစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ပါ ၀ င်သောအောက်ဆီဂျင်များဆုံးရှုံးသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အရည်ဖြစ်လာသည်။ လိင်တံသို့ပြန်မရသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်, ဖြတ်တောက်ခံရဖို့ရှိခြင်း၏အချက်အထိ။
ငါ priapism စိုးရိမ်ပူပန်သငျ့သလော
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ ၎င်းသည်ရှားပါးသောရောဂါဖြစ်သည်အချို့ယောက်ျားများသည်၎င်းမှခံစားနေရသော်လည်း၎င်းတွင်ရှိခြင်းကိုဝန်ခံရန်ခဲယဉ်းသည်။ အစောပိုင်းရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသောအားဖြင့်များစွာသောရှုပ်ထွေးပါဝင်ပါဘူး။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤရောဂါသည်အခြားပြproblemsနာများနှင့်မကြာခဏရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည် (သို့) အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသေးသည့်အတွက်ပင်နောက်ကျသောရောဂါလက္ခဏာသည်ကြီးမားသောရှုထောင့်များ၏ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
ယခု ဒီရောဂါကသင့်ကိုမစိုးရိမ်သင့်ဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့ကုသမှုအတော်များများရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောရောဂါလက္ခဏာအချို့မှသင်ခံစားနေရလျှင်၊ သင်သည်ပြီးပြည့်စုံသောစာမေးပွဲပြုလုပ်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုများပြုလုပ်ရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူထံသို့အမြန်ဆုံးသွားသင့်သည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၌ကျွန်ုပ်တို့ကုသခဲ့သည့်ရောဂါများအားလုံးနှင့်များသောအားဖြင့်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအထီးမျိုးပွားအင်္ဂါ၏ရောဂါများသည်များသောအားဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသည်သို့မဟုတ်သိပ်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအချိန်နှင့်အမျှရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ ၎င်းကိုအဆုံးသတ်သည်ကိုကိုယ်ပိုင်ကုသမှုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ရက်များ၏ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်တွေ့ပြီဖြစ်သည်။
သင်၏လိင်တံတွင်ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါက၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်တိုင်ဆရာဝန်ထံသွားပါ။ ၎င်းသည်အရာများကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်နှင့်ဖြစ်ပျက်နေသောသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်နေသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုအဖြေရှာရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » Priapism: ဘာလဲ, အကြောင်းတရားများနှင့်ကုသမှု